XOG: Col. Barre Hiiraale oo qorsheynaya inuu ku duulo Kismaayo |
XOG: Col. Barre Hiiraale oo qorsheynaya inuu ku duulo Kismaayo
Warbixin lagu kalsoon yahay oo laga helay magaalada Kismaayo ayaa sheegaysa in Cornel Barre Aadan Shire Barre Hiiraale uu weerar ku yahay magaalada Kismaayo iyo deegaanno kale oo Jubbada Hoose kamid ah.
Isbahaysiga Cornelka oo hadda ku sugan meel duuleedka ka ah magaalada Kismaayo oo lagu magacaabo Goobweyn waxaana halkaasi ay ku sugnaayeen Barre iyo ciidamadiisa tan iyo markii Kismaayo dagaalka looga soo saaray.
Warar qarsoodi ah oo aynu ka helnay magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in Kismaayo amnigeeda si weyn loo adkeeyay oo laga baqdin qabo weerar magaalada uu ku soo qaado Cornel Barre Aadan Shire.
Ilo wareedyo ku sugan duuleedka Kismaayo oo ka ag dhow Barre ayaa sidoo kale u sheegay Warqaad in isbahaysiga Barre Hiiraale ay go’aansadeen in magaalada ay tageen oo aanay u dul qaadan karin in magaalada ay intaas ka sii maqnaadaan.
Arrinta ugu weyn oo Barre ku qasbaysa inuu dagaalamo ayaa lagu sheegay in dowladda Federal-ka Soomaaliya ay ka gaabisay wada hadalladii u dhxeeyay dhinacyadii ku dagaalamay Magaalo xeebeedka Kismaayo oo uu isagu ku jiray.
Dhinaca kale, warar horudhac ah oo laga soo xigtay aqablaka Madaxtooyada Kismaayo ayaa lagu qeexay in ciidamada maamulka KMG Jubba ee Axmed Madoobe lagu amray in ay feejignaadaan oo ay sugaan amniga magaaladaasi.